रवि ओड प्रकरणमा बसन्त थापाले किन गरे यस्तो निर्णय ? यस्तो छ कारण – जलजला अनलाइन
Posted on February 5, 2019 Author Comments Off on रवि ओड प्रकरणमा बसन्त थापाले किन गरे यस्तो निर्णय ? यस्तो छ कारण
माघ २३, काठमाडौं । नेपाल आइडल रवि ओडले आफ्नो गीत खराब तरिकाले गाएको विषयमा मौन बसेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै संगीतकार बसन्त थापाले लोक दोहोरी प्रतिष्ठानबाटै अलग भएको घोषणा गरेका छन् ।
बसन्तले सोमबार राति प्रतिष्ठानबाट अलग भएको बताएका हुन् । उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘लोकगीतको सर्जकलाई पलपल आक्रमण भइरहँदा मौलिकतामाथि प्रहार भइरहँदा प्रतिष्ठामाथि गाली बर्सिरहँदा पनि टुलुटुलु हेरिरहनेहरु म मर्दा मलामी जान्छन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिनँ । त्यसैले आजका मितिले राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानमा आफू नरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
बसन्तले भने रविसँग व्यक्तिगत बैमनश्यता नभएको तर, व्यवसायिक प्रयोजनका लागि अनुमति विना अरुको गीत गाउन नहुनेमा जोड दिँदै आएका छन् । तर, यो प्रकरणमा राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान मौन बसेकोमा बसन्त असन्तुष्ट छन् । अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा बसन्तले भने, ‘म अहिले एकदमै डिस्टर्व छु । प्रतिष्ठानबाट अलग्गिने मेरो आत्मनिर्णय हो । कसैसँग सल्लाह गरेर निर्णय लिएको होइन । यो विषयमा अहिले थप केही बोल्न चाहन्न ।’
लोकदोहोरी प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष पशुपति शर्माले भने बसन्तले उठाएको विषय जायज भएको बताए । प्रतिष्ठानको फागुन १ गते वैठकमा यसबारे कुराकानी हुन सक्ने भन्दै उनले फेसबुकमा आएको गालीबाट विचलित नहुन आग्रह गरे ।
चैत २६, काठमाडौ । द्वन्द्व निर्देशक तथा खलनायक राजेन्द्र खड्गी थुनामुक्त भएका छन् । उनीमाथि लागेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी मुद्धाको सुनुवाई उच्च अदालत पाटनले धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश दिएको छ । उच्च अदालतले तोकेको पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर उनी आइतबार नै थुनामुक्त भएका हुन् । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार अभियोगमा उनलाई काठमाडौं […]
निर्मला हत्याकाण्ड: अनुसन्धान जिम्मा कञ्चनपुर प्रहरीलाई किन दिइयो ?
असोज १, काठमाडौँ । तेह्र वर्षीया निर्मला पन्तको हत्याका विषयमा अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय स्तरबाट प्रहरी र गृह मन्त्रालयले अलगअलग समिति गठन गरे पनि छानबिनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कञ्चनपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई नै दिइएको छ। कञ्चनपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई आवश्यक जनशक्ति र प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयले अनुसन्धानको सबै जिम्मा कञ्चनपुर प्रहरीलाई दिएको हो […]
२१ बर्षीय युवकले ३१ बर्षीय आफ्नै प्रेमिकालाई फेसबुकमा वेश्या भनेर लेखेपछि…
Posted on February 27, 2018 Author जलजला अनलाइन
फागुन १५, काठमाडौं । आफ्नै प्रेमिकालाई फेसबुकमा ‘वेश्या’ भन्दै गाली गर्ने एक युवक पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले पाल्पा घर भई काठमाडौं बस्ने २१ वर्षीय विक्रम मल्ल ठकुरीलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीका अनुसार एक ३१ वर्षीय महिलासँग उनी विगत ३ वर्षदेखि ‘लिभिङ टुगेदर’मा थिए। ती महिला डिभोर्सी थिइन्। सँगै बसेपछि खर्च महिलाले नै गर्दै आएकी […]
आज साउदी, मलेसिया, युएई, कतार लगायत सबै विदेशी पैसाको मूल्य बढ्यो (सुचिसहित)
यूएस–बंग्ला जहाज दुर्घटना: नेपालले रिपोर्ट सार्वजनिक गरेलगत्तै बोल्यो बंगलादेश, अब के हुन्छ ?